भोलि माघे संक्रान्तिका लागि तरुल किन्न जानुहुँदैछ ? जान्नुहोस् मूल्य यस्तो छ • Janaboli
भोलि माघे संक्रान्तिका लागि तरुल किन्न जानुहुँदैछ ? जान्नुहोस् मूल्य यस्तो छ
काठमाडौं । सोमबार यसवर्षको माघे संक्रान्ति परेको छ । माघे संक्रान्तिमा खाइने तरुलको भाउ अघिल्लो वर्षको तुलनामा महँगो भएको छ । यो वर्ष तरुलको मूल्यमा औषतमा १० देखि १५ प्रतिशत भाउ बढेको छ । शुक्रबार र शनिबारको तुलनामा आइतबारदेखि तरुलको भाउ घट्न थालेको काठमाडौंको मुख्य थोक बजार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
दुई दिन अघिको तुलनामा आइतबार तरुलको मूल्यमा २० प्रतिशतले कमी आएको समितिले जनाएको छ । माग अनुसारकै तरुल भित्रिएको र सोमबारका लागि धेरै कारोबार समेत भइसकेको हुदाँ भाउ घट्न थालेको समितिका सूचना अधिकृत विनय श्रेष्ठले बताए । उनले स्वदेशी उत्पादनले माग धान्ने हुँदा तरुलको कारोबारमा खासै समस्या नभएको समेत बताए । माघे संक्रान्ति चाडमा काठमाडौं लगायतका देशका मु्ख्य शहरहरुमा तरुलको कारोबार धेरै हुने गरेको पाईन्छ ।
यसैबीच चितवन, पाल्पा, मकवानपुर, धादिङलगायत जिल्लामा भने तरुलको राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । यी क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा नै तरुल खेती हुने गरेको छ । संक्रान्तिका लागि केहि मूल्य बराबरको तरुल भारतबाट समेत आयात हुने गरेको छ । संक्रान्तिका लागि काठमाडौं लगायत देशभर तरुल, पिँडालु र सखरखण्डको कारोबार पनि बढेको छ ।
कति छ तरुलको मूल्य
कालिमाटी बजारमा आइतबार सिमल तरुल किलोको एक सय रुपैयाँ, वन तरुल २५० देखि ३ सय रुपैयाँ,रातो तरुल १सय ४० देखि १ सय ५० रुपैयाँ, पानी तरुल ४५ देखि ५० रुपैयाँ, चितवनको तरुल ५५ देखि ६० रुपैयाँ, तराईको रातो तरुल ७० देखि ८० रुपैयाँ, हात्तीपाइले तरुल एकसय रुपैयाँदेखि एकसय १० रहेको छ । यस्तै स्कुसको जरा २ सय ५० देखि २ सय ७० रुपैयाँ, भारतीय तरुल किलोको ४५ देखि ५० रुपैयाँ, रुपैयाँ, पिँडालु ४५ देखि ५० रुपैयाँ र सखरखण्ड ६५ देखि ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।